भत्ता खाएर कहाँ गए सांसद ? हेर्नुस् त देशकै बेइजत!::News from Nepal
भत्ता खाएर कहाँ गए सांसद ? हेर्नुस् त देशकै बेइजत!
जनताले चुनाव जिताएर सांसदहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधीत्व गर्दै सदनमा पठाएका छन् तर सांसदलाई सदन भन्दा अरुनै प्यारो भएपछि के हुन्छ ? आजको प्रतिनिधीसभाको बैठकको हरिविजोग हेर्दा राम्रो सँग थाहा हुन्छ । सांसदहरुले यति सम्म बदमासी गरेका छन् की संसद बैठकमा आउँने हाजिर गर्ने भत्ता पक्का गर्ने अनि पुरा बैठकमा नबसी अर्कै काममा निस्किहाल्ने प्रवृती ह्वातै बढेको छ ।
आजको प्रतिनिधी सभको बैठकमा पनि त्यस्तै भया बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले लगातार ३ मिनेट घन्टी बजाएका छन् । महराले कुनै देवीदेवताको पूजापाठ तथा आरती उतार्नका लागि सो घण्टी बजाएका भने होइनन् । विधेयक पास गर्ने बेला संसद कार्यकक्ष पूरै रित्तो भएपछि उनले गणपुरक संख्या पत्ता लगाउनका लागि घण्टी बजाएका हुन् ।
संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि विधेयक पारित हुन संसदको कम्तिमा एक तिहाई संख्या ६९ हुनुपर्ने थियो । गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख महराले १५ मिनेटका लागि बैठक रोके । बेलाबेलामा गणपुरक संख्या नपुगेर सदन बैठकनै स्थिगित गरिएका थुप्रै उदाहरणहरु रहेका छन् । यस बिषयमा सांसदहरुलाई जति सचेत गराएपनि उनिहरु सुध्रिएका छैनन् । बाहिरै भएर नआउँनु त छुट्टै कुरा हो तर बैठकम आउँने हाजिर गरेर भत्ता पचाएर हिढ्ने अनि त्यही कारणले सदनको काम अवरुद्ध हुने चाँही ठुलो रोगको रुपमा रहेको छ ।